4C, 4A, 4B & Noocyada XnumX Xajmiga & Qaababka Maqaarka Midab Madow
Kala duwanaanta noocyada 4 iyo 3A, 3B ama 3C Textures?
Labada ugu weyn Noocyada timaha badan dumarka midabka leh waxay leeyihiin waxyaabo isku mid ah, kala duwanaan, iyo arrimaha guud. Tusaale ahaan, kuwa leh nooca 3, waxay u muuqataa inay noqoto qashin marka qoyan yahay. Laakiin sida ugu dhakhsaha badan oo ay u bilowdo in ay qalalaan si deg deg ah ku soo noqo ilaa ay ku adkaatay state.
Kuwa leh 4a 4b iyo 4c dharka timaha ayaa leh qaar ka mid ah qaababka ugu caansan uguna qurux badan! Si kastaba ha ahaatee, tifaftirkani sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu dhib badan uguna hagaagsan si ay u daryeesho sababtoo ah qaababka lakabka adag.
Nooca 4 timaha dabiiciga ah ayaa sii ahaan doona mid adag marka uu qoyan yahay oo uu yeesho curls ama xargo adag marka uu qalalan yahay. Waxaan jeclahay dhammaan noocyada kala duwan ee timaha dabiiciga ah, waxaan aad ugu faraxsanahay in haween badani ay bilaabeen inay isku soo baxaan timaha dabiiciga ah ee dabiiciga ah.
Waxaan doonayaa in aan kula wadaagno qaar ka mid ah farqiga udhaxeeya faraqa u dhexeeya dharka timaha kala duwan iyo qaar ka mid ah talooyin fiican oo lagu xanaaneeyo timahaaga.
Gawaarida ama dhejiska waa curlsyo aad u adag oo ah meesha dhexroorka ee curlka ah oo kaliya tiro millimitir ah oo ballaaran. Himiladayda boostadani waa inay kaa caawiso inaad barato wax kasta oo aad awoodid si aad u ogaato habka ugu wanaagsan ee lagu kori karo oo loo ilaalin karo muddo dheer, qaro weyn, iyo madaxa caafimaadka leh iyada oo aan loo eegin waxa aad ka muuqato.
1 Maxay Tahay 3 Timaha?
5 WAA MAXAY TAHAY 4 HAIR?
9 Sidee loo daryeelaa?
9.1 Extensions Hair Extensions
9.1.1 Waxyaabaha kale:
9.5 Habka LOC
Maxay Tahay 3 Timaha?
Kuwa leh nooca 3 waxay u muuqdaan kuwo badan oo jidhka ah, ka soo boodaan oo u iftiiminayaan timahooda. Sanku caadi ahaan waa mid sarreeya. Luqadku waxay tilmaamaysaa sida iftiinka iftiinka looga soocayo timaha timaha. Timuhu sida caadiga ah way fududahay qaabka, loola dhaqmayo, iyo toosan. Waxyaabaha timo yar ayaa loo baahan yahay qeexaan curry kuwaas. Waxaan doonayaa inaan burburiyo khilaafaadka ka dhexeeya 3A, 3B & 3C.
Kuwa leh Timaha 3a ha yeeshee qaabka cirridka oo kale oo suurtagal ah. Wax kasta oo xor ka ah 3A ayaa ku dhici doona labada qaybood. Kuwa leh timaha noocyada 2a-2c waxay lahaan doonaan mawjado oo aan curlaynin. 3a Noocyada timaha dabiiciga ah caadi ahaan waxay leeyihiin sharaf aad u sareeya, taasoo macnaheedu yahay in uu leeyahay kabo sare.
3a timo jilicsan maaha sida caadiga ah qaboojiyaha cufan, saliida, ka tago xaaladaha xayawaanka ama alwaax culus guud ahaan maxaa yeelay tani waxay hoos u dhigaysaa timaha oo waxay u muuqataa in la jajabiyo halkii aad u jilicsan lahayd. Muuqaalkan timaha wuxuu ku fiican yahay fasax u dhigma biyaha-ku-salaysan ee-xaaladaha.
Curls Kuwani waxay leeyihiin fiilo buuxa foosto. Maaddaama timuhu ku sii dheeraanayaan curry si ay u dhacaan qaab "S" maadama ay tahay miisaanka timaha, taas oo u muuqata in ay u jilicsan tahay ka badan inta badan. Habka ugu wanaagsan ee looga fogaado isticmaalka alaabta qaldan ee timahaaga waa in la eego maaddooyinka. Haddii maadada 1-3 ee ugu horreeya ay yihiin saliid ama macdanta shiidaalka, ka dibna ka badan tahay, sheyga wuxuu noqon doonaa mid kulul ama dabacsan timahaaga dabiiciga ah.
Laga soo bilaabo waayo-aragnimadayda inaan noqdo timaha dabiiciga ah ee dabiiciga ah, waxaan arkaa in qaabkani curlka ahi uu ku badan yahay kuwa Hispanic ah.
Si aad u qeexdo curlahan waa dhaqso fudud oo aad ku tagto fasax nadiifiye ah oo shaqeeya ugu fiican. Ka dibna timaha u oggolow hawo qalalan.
credit credit IG: taty_froever
Kuwa leh Timaha 3b waxay leeyihiin sifooyin u dhigma timaha 3a. Xaaladan timuhu sidoo kale waxay u egtahay mid aad u sarreeysa oo leh joodar leh jimicsi badan iyo timirta timaha. Nooca curyaaminta ee timaha 3b wax yar ayaa ka yar oo ka yar kan 3a. Foornada cirifka waxay u egtahay mid ka mid ah calaamad ballaaran oo Crayola ah.
Timaha 3b waa meesha aad ka bilaabi karto inaad aragto shaashadda iyo bararka oo ku taal shaxda timaha. Kuwaas oo leh dharka 3b dabiiciga ah ayaa laga yaabaa inay ubaahdaan inay isticmaalaan xaaladaha fasaxyada ah iyo kareemada lafdhabarta si ay u ilaaliyaan qaboojiyaha. Si kastaba ha ahaatee, wali waa mid toos ah oo aan waxtar lahayn si loo qeexo timaha 3b.
Dhaqdhaqaaqa iyo udubdhexaadku waa mid ku haboon iyo qaab muuqaal leh oo loogu talagalay kuwa leh xurunta 3b. Haddii tani timuhu timaado ka dib markaad yareysid timaha, waxaa badanaa lagu qeexay curry. Waxyaabaha waaweyn ee lagu isticmaalo nooca timaha waxay la mid yihiin kuwa 3A. Waxyaabaha leh glycerine waxaa ka shaqeeya weyn sida ay tahay saliid biyo ku saleysan waxayna siin doontaa qeexitaan heer sare ah adoo miisaamaya timaha.
Inkasta oo qof kasta iyo qowmiyaddiisa ay yeelan karaan timaha 3b, si caadi ah loogu arko shakhsiyaadka isku dhafan ama kuwa gaarka ah. Dadka madow ama Afrikaan ah oo Afrikaan ah oo isku qasan yahay qowmiyad kale oo caadiyan u muuqda in ay leeyihiin timo cufan leh ayaa badanaaba leh lafdhabar. Si kastaba ha noqotee, uma baahnid inaad noqotid mid aad ujirta qaabka xayiraadda 3B. Dhaqdhaqaaqa iyo googoyntu waa kuwo aad u caan ah oo caan ah oo leh kuwa leh timaha 3B.
credit credit OG: @naturalhairobsessed_
Timaha 3c wuxuu leeyahay qaab gaar ah oo 3a iyo 3b aysan haysan. 3b timo ayaa kor u kaca halkii hoose. Waxay micnaheedu tahay inay bilaabi doonto inay si toos ah u koraan jihada timaha timaha, ka dibna sida timuhu u dheeraato oo ay miisaan u tahay, waxay bilaabi doontaa inay dhisto qaab abuur ah oo la yiraahdo curl
Corbin Bleu waa tusaale wanaagsan oo ah qaabkan. 3c waxay u baahan doontaa isku dhafka u dhexeeya kareemka culus iyo waliba qaar ka mid ah badeecooyinka dhaadheer biyaha. Tani waa sheyga oo jecel sheyga. Inta badan macaamiishayda oo haysta timaha 3c waxay isticmaali karaan wax kasta oo alaab ah.
Waa mid dhexdhexaad ah oo u dhaxeeya dabacsanaan iyo timo jilicsan. Timuhu waxay heli karaan jahwareer, iyo alaabta daryeelka timaha ayaa loo baahan yahay si ay u caawiso qeexidda curlsada oo ay ugu yaraan qabato.
Kuwa leh 3c timaha waxay bilaabi doonaan in ay yaraadaan dhaqitaanka waxayna tagaan oo ay ku daraan waxyaabo badan oo la xariira shaqadooda caadiga ah. Habka ugu caansan ee lagu qeexayo curiyaha 3c waa cidhib u ah sida qubeyska iyo goosaarida waxay u baahan tahay waqti iyo badeecado dheeraad ah.
Qalabka cirridka weyn ee loogu talagalay timaha 3c waa buraashka Denman. Waxaa jira waxyaabo badan oo kale oo qeexaya burushyada suuqa si ay u doortaan hadda.
Dumar badan oo leh timaha 3c ayaa loo tixgeliyaa inay ugu fiican yihiin adduunyada marka ay timaado cufnaanta iyo dhumucdeeda. Cufnaanta macnaha waxa weeye inta xajmiga timaha ee aad leedahay iyo qoto dheer oo ku tilmaamaya sida xoqan kasta oo timaha ujeeda yahay iyo abuurista madaxa buuxa ee timaha dabiiciga ah!
credit credit ig @simplyshumba
WAA MAXAY TAHAY 4 HAIR?
Hello, nooca 4 Faashadaha dabiiciga ah! Haddii aad u dirtay boostada, waxaad u maleyneysaa wax walba oo ku saabsan Nooca 4. Waa hagaag, waanu haynaa. Tilmaamahan Guud ee Nooca 4 Timaha wuxuu daboolayaa wax kasta oo ku saabsan sida loo go'aamiyo haddii aad haysato timo 4 si aad u daryeesho timahaaga qaababka ilaalinta. Aan halkan ku dhufanno.
Nooca timaha 4 waxaa lagu magacaabaa sida naabiga or kinky, laakiin xaqiiqda, tani waa nooca timaha ugu yar. Cirifka ayaa aad u adag in shaqaaluhu timo u tixraacaan sida jilicsan. Timaha dhaadheer dabiiciga ah waxay koraan oo baxaan. Waxay u baahan doontaa wax badan oo wax soo saarka iyo wax-qabadka si ay u helaan. Nooca 4 timaha dabiiciga ah waa jilicsan oo qalafsan. Waxay leedahay boodh yar oo leh boodh yar marka laga reebo timaha lagu qeexay qaab. Nooc 4 timaha dabiiciga ah waxay qabsan kartaa qaabkani waana uu jecel yahay qoyaan. Wax badan ka baro timo timo iyo isbeddello.
Timaha 4A waa mid ka mid ah saddex qaab oo ah nooca 4. Noockani wuxuu abuuraa ciriiri-dhejis ah oo u eg ciriiri ama yar yar. Tilmaamahani wuxuu muujinayaa marxalad ku filan oo qoyan. Dumarka oo ku jira qaybtaan waxay yeelan karaan wax ka badan hal nooc oo curl ah. Laakiin 4a ayaa noqon doonta aqlabiyadda.
4a timo waxay leedahay curls yar ama xargo yar. Cabbirka lakabka wuxuu noqon karaa qalinka qalinka ah marka uu si buuxda u biyo u buuxiyo. Nidaamka curlka ahi wuxuu si fiican u shaqeeyaa baqshiinka, ka soo baxa, bantu, iyo noocyo kale oo badan.
Inkasta oo la dhaqay iyo tagitaankoodu uu suurtagal yahay tan tifaftirka, badi dumarka ayaa doorta inaysan sameynin habdhaqankaas sababtoo ah qulqulka. Sababtoo ah dabeecadda cakiran ee timaha 4a ayaa leh hoos u dhac weyn oo aan muujin dhererka saxda ah ee aan habeynin, waa qaab. Timaha 4a waxay si fiican u sameeyaan sheyga ku salaysan glycerin. Iyada oo ku xiran dareeraha timaha, waxaad u baahan kartaa kareem culus si aad u xirtid qoyaanka.
Sawirka sawirka @tropicurlie ig
Haddii aad haysato wakhti adag oo lagu ogaanayo haddii timahaagu yahay lakabka S-shaped ama jilqad adag oo aad u adag tahay waxaad 4B, oo sidoo kale loo yaqaano midigta dhexe. Noockani wuxuu ka kooban yahay isku-dhaf adag-curls ama z-curls dabacsan.
Timaha 4b badanaa way ka jajaban yihiin timaha 4C waxayna sii dheeraan karaan xoogaa dheer waxayna sii dheeraan karaan muddo ka dheer timaha 4C. Warqadahayga leh 4b waxay leeyihiin timo qaro leh muuqaal suuf ah marka aan la qeexin. Waxay qaadataa xoogaa waxoogaa ka badan oo lagu sameeyo curlsada.
Xajkani wuxuu leeyahay iskudhaf gacmeedyo iyo wargeysyo Inta badan gabdhaha 4b iyo qaababka iyo qaababka timahooda wax kasta. 4b waxay u taagan tahay sida caadiga ah oo si sahlan loo jabiyo waxayna u baahan tahay qoyaan joogto ah.
Noocyada hoos-u-dhaca ayaa ah hab weyn oo ay ku koraan oo u ilaaliyaan dhererka. MNHE Collection Collider, iyo sidoo kale Urur Kinky Collection, wuxuu bixiyaa kordhin iyo kumbuyuutar oo isku dhafan leh qaab-dhismeedkani.
Sawirka Sawirka @2frochicks
Timaha 4C waa mid si weyn u buuxsamay oo la mid ah 4b, laakiin nooca timaha noocan ah wuxuu caadi ahaan leeyahay qeexitaan yar oo khibrad leh qadarka ugu sarreeya. Dukaamada ayaa si adag u xajinaya lakabka midba midka kale. Dadka qaarkiis waxay yiraahdaan timaha 4c waxay leeyihiin qaab yar, laakiin taasi waa qalad. Timuhu ma sameyso dhibco fiiqan oo dib u soo celiya meeshii ay ku haboontahay oo keliya. Laakiin weli waa curl Tusaale ahaan, qof leh 4c timaha wuxuu yeelan karaa 12 injirta timaha marka la kala fidiyo, laakiin waxay u muuqan kartaa inay ahaato 3-4 inches oo dhererkeeda dhaqaaleed iyo gobolka.
Badi dabeecada 4c ma jecla inay xirto oo dhaqaajiso. Habka ugu caansan ee lagu qurxiyo timaha 4c wuxuu la socdaa boomaatada oo ka soo baxaya maqnaanshaha marka ay muujinayaan in yar oo ka dheer oo timaha la jimicsado oo la maamuli karo. Goobaha ugu adag ee ka soo jeeda jilicsanaanta iyo jilicsanaanta ilaa wiry iyo qalafsanaan. Timaha 4C caadi ahaan waxay leeyihiin heerar sare oo udubdhexaad ah, taas oo fududeyneysa in la nuugo qoyaan laakiin sida ugu fudud ee lumi karo. Waxyaabaha saliidda ku salaysan waxay si fiican u shaqeeyaan si ay u seeraan qoyaanka iyo sidoo kale waxay u fiican yihiin wax-qabadka style. Fiiri boggayaga habka LOC! MNHE 4C timo clip hubso inaad ku raaxaysato sida ay u sameeyeen si ay u eegaan sida saxda ah ee aad u sameysid.
Sidee loo daryeelaa?
Waxaad awoodi kartaa sidoo kale isticmaal - timo afro ah si aad timaaddo timahaaga dabiiciga ah qaab muuqaal ah ama waxaad ku dhejin kartaa caanaha sare ama runtii Afro kinky timo jilicsan waa hab weyn oo lagu daro mugga iyo dhererka timaha afkiisa ama iibso xayiraadaha timo jilicsan.
kinky timaha tooska ah
Waa kuwan qaar ka mid ah talooyinka ku saabsan sida loo xakameeyo timahaaga 4 si aad uhesho qoyaan, caafimaad leh, iyo korriin.
Waa in aad isticmaashaa naas-nuujiyaha maalinlaha ah si aad u kiciso curiyahaaga. Waxay sidoo kale u sahlaysaa in la maareeyo si dhaqso ah subaxdii. Isticmaal mid ka mid ah waxyaabaha la isku qurxiyo ee kor ku xusan si loo abuuro qaabka aad rabto.
Waxyaabahaasi waa kuwo ku haboon in lagu ilaaliyo 4C qoyaan la'aan iyadoon la dhisi karin. Waxyaabahaasi waxay sidoo kale ujeedadoodu tahay inay joogaan timaha 4C ee la maareyn karo oo jilicsan.
Sunny Isle Jamaican Black Castor Oil Oil dheeraad ah
CURLS Blueberry dufanka xakamaynta
Cantu Shea Butter Leave ee Cream-ka Dayactiraadda
Iyadoo ku xiran sida aad firfircoon tahay, waxaa laga yaabaa inaad ogaato in timahaaga 4 ee kaliya u baahan yahay in la dhaqo todobaad kasta 1-2.
Isticmaal xakameyn ku saabsan timaha qoyan ka hor intaadan ku dhaqin timaha si aad u walbahaarisid tuubbooyinkaada, adigoon cidla ahayn. Waxaad la yaabi laheyd waxa qunyar socodka gaabisku u samayn karo timahaaga.
Isticmaal isku dhaqida ka dib markaad sii deynaysid qashinkaaga. Diirada saar maqaarka si aad uga saarto koritaanka.
Isticmaal shaambo nadiif ah. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa Shea Moisture Jamaican Castor Oil Shampoo. Shambo waa la nadiifiyaa iyadoo aan xoqin timaha.
Dhamee iyada oo leh qul-qulqulin qoto-dheer. U ogolow inu kuwan timo timahaaga 15 hoosta hoostiisa ama fiilada si natiijada ugu wanaagsan.
Maxaa keena "Habka 4 LOC Habka" ka duwan habka LOC ee caadiga ah? Habka waa isku mid. Si kastaba ha noqotee, alaabta loo isticmaalo nooca 4 timo waa inay ahaadaan alaab saliida ku salaysan.
Bixintaada waa in ay ahaataa saliideed saliidda ku salaysan iyo biyo-ku saleysan, saliiddaadu waa inay ahaataa saliid hilib ah ama saliida qumbaha, iyo kareemka styling iyadoo la isticmaalayo mid ka mid ah talooyinka kor ku xusan.
Dahab ah ama satin, dumar! Ku hay buxisyada qurxoon ee quruxda badan habeenkii la xiran yahay maro ama giraan. Haddii aad heysato wakhti, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad timo timahaaga ka hor inta aanad seexan si aad u kala bixiso curiyahaaga maalinta xigta.
Dabeecada Heerka Dabiiciga ah ee Dabiiciga ah - Tani waa muuqaal ilaaheyga ugu caansan. Fikradaha munaasibka ah, dhacdooyinka khaaska ah ama timaha aan lahayn-mashiinka-u samee toddobaadka shaqada. Sidoo kale, hubso inaad isticmaasho noo Timaha ugu wanaagsan tooska ah ee tooska ah loogu daro dherer dheeraad ah.
Crochet Braids - Kuwani waxay si dhakhso ah u noqonayaan qaabka difaaca ugu caansan si aad u dherjiso timaha adiga oo aan lahayn dhoobo ama doofaarro. Iyadoo xirmooyinka caanaha, waxaad isticmaali kartaa timo sida kan timo yar yar oo timaha tufaax ah loogu talagalay qaabeynta. Xirfadaha Crochet waa kuwo sahlan, waxaadna daawan kartaa buug weyn oo ku saabsan halkaan.
Nuji dharkaaga dhabta ah ayaa waxyeello leh?
Sida Loogu Noqon Karo Dabaysha